မျှော်လင့် နေဆဲဘဲ: အိအိဝင်းရဲ့ အိုစာ မင်းစာ
သူများမျက်ရည် ကိုယ့်မျက်ဝန်းမှာ ကျဖူးလား
သူများမျက်ရည် ကိုယ့်မျက်ဝန်းမှာ ကျဖူးလား လို့ ကျွန်တော် မေးလိုက်လို့ နားလည်ပါ့မလား။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ကတော့ ဒီလိုမျိုး သူများမျက်ရည် ကိုယ့်မျက်ဝန်းမှာ နှစ်ခါကျဖူးတယ်။ တကယ်တမ်းပြောရရင် ဒီအကြောင်းတွေကို တွေးမိရင် ကျွန်တော် မျက်ဝန်းမှာ အကြိမ်ကြိမ် ကျရတယ်။
ဒီအကြောင်းတွေ ကျွန်တော် ပြောပြမယ်။
လွန်ခဲ့သော ၃ နှစ်လောက်က ကျွန်တော် အင်တာနက် သွားသင်သော သင်တန်းဆရာက အလွန် အလုပ်ရှုပ်သူ တစ်ယောက် ဖြစ်တယ်။ ဆရာ့လို ပညာ ၊ ဆရာလို တတ်ကျွမ်းမှု နဲ့ ဘယ်နိုင်ငံကိုမှ မထွက်ပဲ ဆရာ ဘာတွေ လုပ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကုတ်ကပ်နေတယ်လို့ ထင်ပါသလဲ။
ဒါနဲ့ တစ်နေ့ အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လာတော့ ဆရာက သူ့အကြောင်းပြောပြတယ်။ ဆရာရဲ့ မိဘ အသိုင်းအဝိုင်း အနေအထားနဲ့ ဆရာ အေးဆေး နေယုံပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဆရာ မနေနိုင်ခဲ့။ ဆရာ့ကို ကြည့်ပြီး ဆရာ့အမေက ခဏခဏ မျက်ရည်ကျရတယ်။ ဘာလို့ မျက်ရည်ကျတာလဲ ဆိုတော့ သူ့သား ဆိုးနေ ပေနေ တေနေ လို့လား။ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီတော့ ဆရာကို ကြည့်ပြီး သူ့အမေ ဘာလို့ မျက်ရည်ကျနေတာလဲ။ ဆရာ့ အမေ မျက်ရည်ကျနေတာ သူ့သား နေ့မအိပ် ညမအိပ် ကိစ္စတစ်ခုကို ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေလို့။
ပြီးတော့ ဒီကိစ္စဆောင်ရွက် နိုင်ဖို့ ဆရာ ဘာတွေ လုပ်လဲ ဆရာ ကွန်ပျူတာ သင်တန်းတွေကို လိုက်သင်တယ်။ တခြားပိုက်ဆံရနိုင်သမျှတွေကို လုပ်ပြီး ရသမျှတွေကိုလည်း ဆရာ ဒီကိစ္စမှာ အကုန်ပုံအောပြီး သုံးတယ်။ ပြီးတော့ ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာ ပညာဒါနဖွင့်ပြီး ကွန်ပျူတာ နဲ့ အင်တာနက် ဆိုင်ရာတွေကို အလကား သင်ကြားပို့ချတယ်။ ဒီကမှ ရလာတဲ့ သင်တန်းဝင်ကြေးတွေနဲ့ ဆရာ့ရဲ့ တခြားသော ဝင်ငွေတွေကို ဒီကိစ္စမှာ ပုံအောပြီး သုံးတယ်။
ဆရာ့မှာ ကိစ္စတစ်ခုကိုပဲ နေ့ရော ၊ ညရော ခေါင်းထဲမှာ ရှိပြီး လုပ်နေမိတယ်။ မင်းတို့ကို ပြောပြမယ်။ မင်းတို့ သိလား။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဟိုး အစွန်အဖျားမှ မဟုတ်ဘူး။ ရန်ကုန်မြို့နဲ့ အဝေးတဲ့ နေရာ တစ်ခုက အကြောင်းလေးပါပဲ..တဲ့ ဆရာက စကားစတယ်။
အဲဒီနေရာကို “ ဒလ ” လို့ ခေါ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒလ မြို့ပေါ် မဟုတ်ဘူး။ အဲဒီကနေ သွားရသေးတဲ့ ကျေးရွာလေးတစ်ရွာမှာ ဒီက ကလေးတွေက အရမ်းဆင်းရဲကြတယ်။ ဘယ်လောက်တောင်မှ ဆင်းရဲလည်းဆိုတော့ သူတို့ကို ဆရာက ၅၀ တန်ပြတယ်။ ဒါကို သိလား ဆိုတော့ သိတယ်တဲ့။ ၁၀၀ တန်ကို ထုတ်ပြပြီး သိလား ဆိုတော့လည်း သိတယ် ဒါနဲ့ သားတို့ ဆန်ဝယ်နေတာလို့ ပြောတယ်။ ၂၀၀ တန်ထုတ်ပြတော့လည်း သိလား ဆိုတော့ သိတယ် မြင်တော့ မြင်ဖူးတယ်တဲ့။
ဒါနဲ့ ၅၀၀ တန်ထုတ်ပြတော့ သူတို့ မမြင်ဖူးဘူး။ ဒါဆို ၁၀၀၀ တန်ဆိုတာ ပိုဆိုးပြီပေါ့။ ဒါနဲ့ ကလေးတွေ ကျောင်းနေလား ဆိုတော့ သူတို့ မိဘတွေ မျက်နှာပျက်တယ်။ သူတို့လည်း ထားချင်ပါတယ်..ဒါပေမဲ့...................................တဲ့။
ဒီ..ဒါပေမဲ့ ဆိုတာရဲ့ နောက်မှာ ဆရာ့မှာ သူ့ဖာသာသူ တာဝန်တွေ ယူပြီး သူ့ဖာသာ ဒီကလေးတွေကို ကျောင်းနေနိုင်ဖို့ ဆိုသော တာဝန်တစ်ခုကို သူယူလိုက်တော့တယ်။ ဒါကို အရေးတော်ပုံ တစ်ခုလို့ ခေါ်ရမယ်။ ကိုယ့်ဖာသာ သူ ကလေးတွေကို ဘယ်လို ထောက်ပံ့နိုင်မလဲလို့ ဆရာ စဉ်းစားတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ ကလေးတွေကို ထောက်ပံ့ဖို့ အဖွဲ့အစည်းလေးတစ်ခု လုပ်ပြီး လစဉ် ၊ နှစ်စဉ် ဆရာထောက်ပံ့တော့တယ်။
ဆရာနဲ့ ပတ်သတ်သော တပည့်တွေကိုလည်း ဒီလို ကလေးတွေ ရှိနေတဲ့ အကြောင်း ပြောပြပြီး ကူညီဖို့နဲ့ ဖေးမ ထောက်ပံ့ဖို့ ဆရာက စည်းရုံးခဲ့တယ်။ ဒါနဲ့ပဲ ဆရာ့အတွက် ကလေးတွေ ကျောင်းတတ်ရဖို့ အရေးတော်ပုံလေးတစ်ခုက အစပျိုးပြီး ဆရာ့မှာ မအိပ်နိုင် ၊ မစားနိုင်နဲ့ ၅၀၀ တန် မမြင်ဖူးသော ကလေးတွေကို ၊ ၁၀၀၀ တန် မမြင်ဖူးသော ကလေးတွေကို ကလေးတွေ ကြီးလာရင် ဘယ်လို ပညာတတ်မလဲ ဆိုသော စိတ်က တွန်းအားပေးပြီး ဆရာ့မှာ မအိပ်နိုင်ဘူး။
ဒီလိုနေ့ရက်တွေက ဆရာ့ကို တွန်းအားပေးပြီး အခုတော့ ဆရာ ဦးဆောင်သော အဖွဲ့လေး တစ်ဖွဲ့က လစဉ်ကလေးတွေကို ပညာရေး ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါပြီ။ ဒီတော့ ကျွန်တော်ကလည်း ဒီမလေးရှားမှ သူငယ်ချင်းတွေကို စုပြီး အရင်က လှူဖူးပါတယ်။ ဒီလို ကလေးတွေရဲ့ အကြောင်းကို ကြားရတော့ ကျွန်တော် ပထမဦးဆုံး သူများမျက်ရည် ကိုယ့်မျက်ဝန်းမှာ ကျဖူးခဲ့တယ်။
ဒုတိယအကြိမ် ကျွန်တော် သူများမျက်ရည် ကိုယ့်မျက်ရည်မှာ ကျတာက အမည်မသိသော စီဒီချပ်လေး တစ်ချပ်မှာ ပါလာတဲ့ အင်တာဗျူး လို့လေးကပါ။ ဒီမှာ အဖွားကြီး တစ်ယောက်ကို ကင်မရာ သမားက မေးတယ်။ ရိုက်တာက တိုက်ရိုက် ရိုက်ထားတာ သရုပ်ဆောင်နေတာ မဟုတ်ဘူး။ ဒီတော့ အဖွားကြီးက...
“ ဟုတ်တယ်..သားရယ်။ အဖွားအရွယ်က ဘာမှလည်း မလုပ်နိုင်တော့တော့။ ဒီလိုပဲ တောင်းစားနေရတာပေါ့။ ”
တဲ့။ တကယ်ကို တောင်းစားနေရတဲ့ အဖွားတစ်ယောက်ကို ကင်မရာနဲ့ ရိုက်ပြီး ဒီခွေထဲမှာ စုထားတာပါ။ ဒီအခွေကို ကျွန်တော် နှစ်ခါပဲ ကြည့်မိပါတယ်။ ဒီထက်လည်း ကျွန်တော် ပိုမကြည့်နိုင်တော့ပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒီနှစ်ခါက ကျွန်တော့် တစ်ဘဝလုံးမှာ ဒီအဖွားပြောတဲ့ စကားကို တစ်သက်လုံး ကြားယောင်နေစေမှာပါပဲ။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော် သူများမျက်ရည် ကိုယ့်မျက်ဝန်းမှာ ကျမိတယ်။
ဒီစကားကို ကြားမိတိုင်း ၊ ဒီအဖွားရဲ့ ရုပ်ပုံကို ကျွန်တော် မျက်စိထဲမှာ ပြန်မြင်မိတိုင်း ကျွန်တော် သူများမျက်ရည် ကိုယ့်မျက်ဝန်းမှာ ကျတယ် ဆိုသလို ကျွန်တော် မျက်ရည်ကျမိတယ်။ ဒီလိုမျိုး အဖိုး ၊ အဖွားတွေ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိနေမလဲလို့ ကျွန်တော် တွေးမိတယ်။ ရင်ဘတ်ထဲမှာ ခံစားတတ်သောနှလုံးသား ရှိသူတိုင်း ၊ ကျောက်ခဲကို နှလုံးသား လုပ်ထားတာ မဟုတ်တဲ့ သူတွေတိုင်း ထိရှ ခံစားမိမှာပါ။
ကျွန်တော်တို့ ဒီလို အဖိုးတွေ ၊ အဖွားတွေကို ဘယ်လို ကူညီ ကယ်တင်မလဲ။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ အခု အဖွဲ့လေး တစ်ဖွဲ့ စလုပ်မိပါတယ်။ ဘယ်လောက်မှတော့ ကြီးကျယ်တဲ့ အဖွဲ့လေး မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သေချာတာ တစ်ခုကတော့ သူငယ်ချင်းတွေသာ ပါဝင်ကူညီမယ်ဆိုရင် ကြီးကျယ်သော အဖိုး အဖွားများကို ကူညီသော အဖွဲ့လေး ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
“ သက်ကြီးရွယ်အို စောင့်ရှောက်ရေးနှင့် ထောက်ပံ့ရေးအသင်း ”
“ http://savetheaged.ning.com ”
ဆိုပြီး ကျွန်တော်တို့ လုပ်ထားပါတယ်။ အဖွဲ့လေးရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်လေးတွေ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လိုအပ်ချက်လေးတွေကို လာပြီး ပြောပြ အကြံပေးဖို့လည်း ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
အခုလောလောဆယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ အမာခံ အသင်းဆိုပြီး ကျွန်တော်တို့ ဖွဲ့ထားပြီး အမာခံအသင်းသားတွေက တစ်လကိုမှ မြန်မာကျပ်ငွေ နှစ်ထောင် ( ၂၀၀၀ ) ထည့်ဝင်ပြီး လစဉ်ရလာသော ငွေကို ကျွန်တော်တို့ ဘိုးဘွားရိပ်သာများမှာ အလှည့်ကျ သွားပြီး ထောက်ပံ့ပေးကမ်းဖို့ စီစဉ်ထားကြပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော် တစ်ခုပြောချင်တာကတော့. . . သူများတွေ ဘယ်လိုပဲ လုပ်နေ လုပ်နေပါ။ ကျွန်တော်တို့ ခေါင်းထဲမှာ ရှိနေတာ တစ်ခုပါပဲ။
“ သင် တစ်နေ့ အိုရမည်။ ”
ဒါ သေချာသည်။ အိုမင်းခြင်းဆိုတာ တစ်နေ့ ကျွန်တော်တို့ အသက်စောစောစီးစီး မသေသွားဘူးဆိုရင် ကြုံကြရမှာပါ။ ဒါကြောင့် တကယ်လို့ မပြောကောင်း မဆိုကောင်းဗျာ။ ကိုယ် အခု အချိန်မှာ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်နေပါစေ ဒီအချိန်မှာ . .ကျွန်တော် မြင်ခဲ့ရပါသော အဖွားလိုမျိုး လေသံ ကျွန်တော် ဘယ်သူ့ဆီကမှ ထပ်မကြားချင်ပါ။ မတွေ့ချင်ပါ။ မမြင်ချင်ပါ။
အခုလည်း ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ အချိန်လေးမှာ ဒီလိုမျိုး လမ်းမမှာ လက်ကလေး ဖြန့်ပြီး တုန်တုန်ချိချိနဲ့ အဖိုးအို အဖွားအိုတွေကို ကျွန်တော်တို့ကို ကျွန်တော်တို့ ဒန်ပေါက်စားပြီး ကြည့်နေနိုင်ပါသလား။ သူတို့ အရွယ်က ဂေဟာလို တစ်နေရာရာမှာ စုပြီး နားနေသင့်တဲ့ အချိန်လေးပါ။
ဒါကြောင့် ကျွန်တော် ဗြောင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲ အားလုံးကို ပါဝင်ကြဖို့ အလှူခံပါတယ်ဗျာ။ အသင်လေးတွေလည်း ဝင်ပေးကြပါ။ မိမိတို့ တတ်စွမ်းသမျှလည်း ဝင်ပြီး စကားနဲ့သော်လည်းကောင်း ၊ အလှူရှင် မိတ်ဆွေများကို ကူညီပြီး ခေါ်ယူပေးခြင်းအားဖြင့် လည်းကောင်း ၊ အကြံဥာဏ်နဲ့သော်လည်းကောင်း ၊ ကိုယ်တိုင်ပါဝင်လှူဒါန်းခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း ပါဝင်ကူညီပေးကြပါ။
အခုတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အခြေတည်ပြီး တတ်ကြွသော လူငယ်လေး တစ်စုက နိုင်ငံရေးကင်းရှင်းစွာနဲ့ သက်ကြီးဘိုးဘွားများကို ကူညီထောက်ပံ့ဖို့ သူတို့ရဲ့ အားလပ်ချိန်လေးတွေကို ဒီလို တန်ဖိုးရှိစွာ အသုံးချဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားကြပြီး သူတို့ စတင်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ လှူဖို့တန်းဖို့ အဓိက အမာခံအနေနဲ့ ဦးဆောင် လုပ်နေသူတွေကတော့ . .. . . .
ရန်ကုန် နှင့် နယ်ဝေးမှ ကုသိုလ်ရှင်များဆက်သွယ်ရန်
(၁)ဇင်အိအိဝင်း (H.P 09-509-3896)
(၃)သိင်္ဂီဖြိုး [ Ph-559292 ( office ) ]
(4) စုစုနွယ် - ( Ph-095072875 )
(၅)စည်သူထွန်း- [ ph - 202841 ( office ) ]
ဆွီဒင် . ဒိန်းမတ်.နော်ဝေး ဂျာမနီ ဖင်လန် ၅ နိုင်ငံ မှ
နိုးနိုး -( noenoemaung07@gmail.com )
Ph . + 4550375488
မလေးရှား နိုင်ငံ မှ ကုသိုလ်ရှင်များဆက်သွယ်ရန်
ကိုဇော်မင်းထက် ( kozaw.sa@gmail.com )
H.P - +60173004238 begin_of_the_skype_highlighting +60173004238
Posted by Mr Htay Tint at 2:25 AM